Wararka Maanta - Hargaysa: Xoghayaha Warfaafinta Waddani Oo Dhaliillo U Jeediyay Xukuumadda
Hargaysa: Xoghayaha Warfaafinta Waddani Oo Dhaliillo U Jeediyay Xukuumadda
Hargaysa (Wararka Maanta): Xisbiga mucaaradka ah ee Waddani ayaa eeddo kala duwan u jeediyay wasaarrado iyo haayado dawladeed oo ka tirsan xumuumadda madaxweyne Muuse Biixi.
Eedahaasi oo ay ka mid yihiin wasiirka warfaafinta oo ay sheegeen inuu lunsaday lacago iyo xad-gudubyo ay xukuumadu kula kacday murashaxiin mucaaradka ka tirsan iyo arrimo kale.
Sida uu sheegay xoghayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ah ee Waddani Maxamuud Cabdi Jaamac (Xuuto), oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta xisbigaasi ee Hargaysa.
Xuuto, waxa uu sheegay in xisbi ahaan ay u arkaan in aan dariiq sharci ah loo marin murashaxiinta xisbiyadda mucaaradka laga xidhay.
Tallaabadaasi oo ku tilmaamay mid lagu carqaladaynayo murashaxiinta xisbiyadda mucaaradka ah iyo in lagu xanibo waxyaabo laga soo gudbay.
READ Daawo Xaaji Muuse Suudi: Farmaajo waxaad heyso soo daa hadii kale kursiga ka kac -...
Xoghayaha Waddani waxa kaloo uu tilmaamay in xisbiga WADDANI uu dacwad ka gudbin doono musharraxiin ka sharraxan xisbiga Kulmiye oo qaarkood ay dawladda Soomaaliya xilal ka soo qabteen iyo kuwo ay sheegeen in aanay buuxin shuruudaha musharraxnimada.
Sidoo kale xoghaye Xuuto, ayaa wasiirka warfaafinta Somaliland ku eedeeyay inuu lunsaday lacag Miisaaniyadii sanadkii hore ee 2020-ka ugu jirtay oo la qorsheeyay in lagu soo iibiyo idaacad qaranku leeyahay.
Maadaama oo ay sanadkii hore fadhiisatay idaacadii waynayd ee Radio Hargaysa, isla markaana ay hadda shaqayso idaacadda FM ta oo keliya.
Waxaanu sheegay in qandaraaskii soo iibinta idaacadaasi oo markii horeba sifo sharci darro ah lagu buxiyay aan ilaa hadda la haynin meel ay ku danbaysay lacagtii lagu soo iibinayay.
READ Xasan Sheekh: waa in la garab istaagaa Ra'isulwasaare Rooble - Caasimada Online
Geesta jale, Maxamuud Cabdi Xuuto, waxa uu ka hadlay maalmo xusas iyo xasuuso ah si gaar ah Somaliland iyo caalamka kaleba.
Kuwaasoo ay ka mid tahay maalinta xoriyadda saxaafadda adduunka oo maanta ku beegan, isagoona saxaafadda somaliland ku hanbalyeeyay xuska 3da May.
Sidoo kale waxa uu sheegay in isla bishan May ku jiraan maalmo Somaliland xasuus iyo qiimo u leh, sida 18-ka bishan May oo ku beegan 30 guurrada ka soo wareegtay markii ay Somaliland gooni isku taageedda iyo sidoo kale 3da isla bishan May oo ku beegan markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee Somaliland Alle ha u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal.
READ Qorshaha DF Soomaaliya ee marka ciidamada Badbaado Qaran laga saaro Muqdisho -...
DAAWO: Shirka Jaraa’id Ee Xuuto:
Wiil dhalinyaro ah oo ku geeriyooday balli ku yaala duleedka Hargaysa
Itoobiya oo sheegtay in ay fashilisay Af-gambi ka dhan ahaa Xukuumadda Abiy…
Masuuliyiinta xisbiga Waddani oo qaabilay safiirka Ingriisku usoo magacabay…
Hargaysa: Waalidiinta arday loo haysto burburkii dugsiga Nuradiin oo ka dayriyay…
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad u jeediyay Golaha Shacabka (SAWIRRO)
Hargaysa: Ciidamada dab-damiska oo warbixin kasoo saray khasaaraha uu roobkii…
READ Ciidamadii iyo gawaaridii uu lasoo goostay Captan Muumin oo dib loogu celiyey DF -...
READ Deg Deg: MD Farmaajo oo taageero weyn ka helay Ruushka & Cabsida laga qabo in...
READ Cabdiweli Gaas oo weerar culus ku qaaday madaxweyne Farmaajo - Wararka Maanta
Qaybaha Select Category Caalamka Videos (117) Somali English News (118) Wararka Somali (1,026) Wararka Videos (212) Warka Caalamka (218) Warka Ciyaaraha (211)